Ujyaalo Sandesh | » डा. केसीद्धारा डडेलधुरा नछाड्ने अडान डा. केसीद्धारा डडेलधुरा नछाड्ने अडान – Ujyaalo Sandesh
डा. केसीद्धारा डडेलधुरा नछाड्ने अडान
२६ कार्तिक (डडेलधुरा)
आठ दिनदेखि अनशनरत डा.गोविन्द केसीले माग पूरा नभएसम्म डडेल्धुराबाट अन्यत्र नजाने अडान लिएका छन् ।
डा.केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई काठमाडौं लग्ने तयारी गरिएको थियो । उनलाई काठमाडौं लग्न नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सोमबार बिहानै डडेल्धुरा पुगेको थियो । अनशनरत डा.केसीले भने आफूसँग यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पताल लैजानु पर्ने भएकाले कुराकानी गर्न गएको टोलीसँग डडेल्धुराबाट अन्यत्र नजाने बताएका हुन्। ‘बरु डडेल्धुरामै मर्छु, माग पूरा नभएसम्म डडेल्धुराबाट अन्यत्र जान्नँ,’ डा.केसीले भने ।
यस क्षेत्रका वासिन्दाको स्वास्थ्य सेवाको अधिकारका लागि अनशन बसेको उल्लेख गर्दै आफ्नो ज्यानको परवाह नभएको डा.केसीको भनाइ थियो। उनको मागमा डडेल्धुरामा पनि सरकार मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
डा.केसीलाई काठमाडौं लग्न र आन्दोलनलाई साम्य पार्नका लागि डडेल्धुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक बसेको थियो। तर, डा.केसीले नै अन्यत्र जान नमानेपछि सर्वपक्षीय बैठकले पछि सरकारको प्रतिनिधिलाई वार्ताका लागि आउन आग्रह गरेको छ।
बैठकपछि डडेल्धुरा अस्पतालका डा.जीतेन्द्र कँडेलले भने, ‘डा.केसीको अडान कायमै छ। उहाँका समर्थकहरू पनि आक्रोसित छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको तर्फबाट माग सम्बोधन गर्न प्रतिनिधि बोलाउने निष्कर्ष आयो।’
डा.केसीलाई काठमाडौं लग्ने तयारी हुन थालेपछि उनको समर्थनमा स्थानीय वासिन्दा आन्दोलित छन्। उनीहरुले बिहानैदेखि डडेल्धुरा सदरमुकाममा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। डा.केसीका माग पूरा नहुँदासम्म अन्यत्र सार्न नहुने स्थानीय वासिन्दाको भनाइ छ ।
उनलाई लिन डडेल्धुरा पुगेको नेपाली सेनाको हेलिकप्टर सैनिक ब्यारेकमा राखिएको छ ।
डा.केसीलाई राख्नका लागि वीर अस्पताल र त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आईसीयू खाली गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार आईसीयू खाली गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
डा.केसी अनशन बसेको आज आठौं दिन हो। उनको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि तीन दिन अघि डडेल्धुरा अस्पतालमा सारिएको थियो।
आइतबार अस्पतालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी डा.केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै गएको जनाएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिदै गएकाले अस्पतालमा राख्न भौतिक पूर्वाधार नभएको उल्लेख गर्दै सुविधायुक्त अस्पताल लग्न आग्रह गरेको थियो ।
उनी अनशन बसेको आठ दिन हुँदा पनि सरकारले भने वास्ता गरेको छैन। उनीसँग वार्ताका लागि समेत पहल भएको छैन।